125 arday ah oo loo xiray dugsiyo la gubay – The Voice of Northeastern Kenya
125 arday ah oo loo xiray dugsiyo la gubay
Iyadoo ay isa soo tarayaan falalka ay ardayda ku gubayaan dugsiyada ay wax ka dhigtaan , waxaa ilaa iyo hadda la xiray 125 ka mid ah oo dhacdooyinkaasi lagu eedeynayo.
Wasiiradda wasaaradda tacliinta ee dalka Amina Maxamad ayaa ku dhawaaqday tallabooyin dhowr oo lagula tacaalayo falal dambiyeedyada noocaasi oo kale.
Dugsiyada leh qeybta jiifka ee loo yaqaano Boarding ayay Mrs Amina ku amartay inay labada toddobaad ee nagu soo aaddan kordhiyaan tirada macalimiinta ee maalin waliba la soconayo habdhaqanka ardayda.
Sido kale waxay soo jeedisay in si gaar ah loola socdo qalabka dugsiyada gaar ahaan marka ardayda ay galinka dambe qaadanayaan casharada dheeraadka ah.
Wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa dhanka kale maamulayaasha iyo guddiyada dugsiyada ku amartay inay sameyaan wax waliba oo karaankooda ah si howlaha tacliinta uusan hakad ugu imaanin.
Sarakiisha wasaaradda waxbarashada u qaabilsan dhanka xaqiijinta tayada ee maamul goboleedyada kala duwan ayaa lagu amray inay maalin waliba soo gudbiyaan warbixin ku aaddan xaaladda amni .
Amina Maxamad ayaa carrabka ku dhufatay in 125-ka arday ee la xiray la rumeysanyahay inaysan si buuxda isugu diyaarinin imtixaanada sido kalena habdhaqankoodu uusan wanaagsanayn.
Dugsiyada laga soo tabiyay dhacdooyinka qeybo ka mid ah dab la qabadsiiyay ayaa kala ah dugsiga sare ee Maranda, midka gabdhaha ee Kisumu , midka gabdhaha ee Ng’iya , Ambira, Maliera, Onjiko, Otieno Oyoo, Chulaimbo, Oriwo, Ngere, Kandiege, Usenge, Barding, St Augustine Nyamonye, midka gabdhaha ee St Mary’s , Mumias iyo dugsiga sare ee wiilasha ee Litein .
Wasiiradda wasaaradda waxbarashada ee dalka Amina Maxamad ayaa shalay guddoomisay shir degdeg ah oo ku saabsan sida wax looga qaban karo falalkan.
Wasiiradda tacliinta Amina Maxamad ayaa lagu wadaa inay maanta tagto gobolkii hore ee Nyanza oo dugsiyada la gubay badankoodu ay ku yaalaan
Amina Maxamad ayaa wacad ku martay in tallabo sharciga waafaqsan laga qaadayo ardayda ku kaca falalkaasi.
Waxay intaasi ku dartay in ardaydaasi shahaadada la siiyo marka ay dugsiyada dhameyaan lagu qorayo inay fal dambiyeed geysteen.
Tallabooyinkaasi waxaa ka mid ah in ardayda dembiyadaasi sameeya aysan ku biiri doonin jaamacadaha dalka.
Sido kale Amina Maxamad, wasiirada wasaaradda waxbarashada ee dalka ayaa ku nuuxnuuxsatay in arday waliba oo lagu cadeeyo inuu ku lug lahaaday dhacdo dab lagu qabadsiiyay dugsi aanan la siin doonin deeq waxbarasho.
Waxaa intaasi sii dheer in shahaadada ka turjumeysa hab dhanka qofka ee ay laamaha amaanka bixiyaan loona yaqano “certificate of good conduct” lagu qorayo in ardayga markii uu dugsiga dhiganayay uu fal dambiyeed geystay.
Wasiiradda ayaa carrabka ku dhufatay in muddo hal sano ah la xiray seddex arday oo dhiganayay dugsiga sare ee wiilasha ee Siakago oo ku yaalo ismaamulka Embu oo ka mid ah xarumaha tacliinta ee la gubay.
Mrs Maxamad ayaa sheegtay in ardaydaasi loo ogolaanayo inay waxbarashada sii wataan in kastoo ay guriyahooda u hooyanayaan sido kalena laga doonayo inay iska xaadiriyaan xafiiska guddoomiye xaafadeedka ugu dhow.
Waxaa mararka qaar degaano kala duwan oo wadanka ka tirsan laga soo tabiyaa dhacdooyin ardayda ay dab ku qabadsiiyaan dugsiyada iyagoo inta badan ka cabanayo maamul xumo iyo dhibaatooyin kale.
← In ka badan 20 qof oo ku dhimatay shil ka dhacay Turkiga
DHAGEYSO Warka subaxnimo ee star fm 8:00 PM →